हामी सक्षम नेतृत्वसहित आएका छौँ, हाम्रो विजयी निश्चित छः सुवर्णा – Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA
Home / News / अन्तर्वार्ता / हामी सक्षम नेतृत्वसहित आएका छौँ, हाम्रो विजयी निश्चित छः सुवर्णा
July 12, 2017 अन्तर्वार्ता Leaveacomment
सुवर्ण श्रेष्ठ ‘संयुक्त व्यवसायिक समूह’ प्यानलको द्वित्तीय उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनेकी छिन् । मदिना इन्टरनेशनल सर्भिसेज प्राली सञ्चालन गरेर बसेकी श्रेष्ठ बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघकी पूर्व सचिव पनि हुन् । यही असार ३० मा हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनेकी श्रेष्ठसँग विश्वन्युजले गरेको कुराकानीः
यही असार ३० मा हुने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको द्वित्तीय उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । तपाईँको उम्मेद्वारी किन ?
मेरो उम्मेदवारी सबै भन्दा पहिला बैदेशिक रोजगार ब्यबसायलाई एउटा गर्विलो ब्यबसायको रुपमा स्थापित गर्न रहेको छ । त्योसँगै ब्यबसायीले आफ्नो छाता संगठनका रुपमा संघ आफ्नै हो भन्ने महशुस हुने गरि काम गर्न, ब्यबसायीले भोग्दै आएका समस्या र चुनौतीलाई नीतिगत रुपमै समाधान गर्न र संसोधनको प्रक्रियामा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐनको प्रस्तावित मस्यौदालाई ब्यबहारिक, ब्यबसायी मैत्री बनाउन पनि मेरो उम्मेदवारी हो । म निर्वाचित भएपछि बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको जिम्मेवारी र कर्तब्यलाई ऐनमा नै ब्यबस्थापन गर्न पहल गर्ने छु । त्योसँगै राहदानी लिनु अगाडि नै अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था गर्ने, आबश्यक मुलुकहरुमा बजार प्रबद्दन गर्न सहजताका लागि जब फेयर तथा भ्रमण आयोजना गर्ने जस्ता कुरामा पनि मेरो पहल हुनेछ ।
एजेन्टको ब्यबस्थापन गर्न र यसका बिकृति हटाउन, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसंग समन्वय गरि सीप बिकासको तालिम दिन, दुई देशबीच श्रम सम्झौता गराउन पहल गर्दै संस्थागतरुपमा घरेलु कामदार पठाउने व्यवस्था ल्याउन पहल गर्ने कुरामा म निर्वाचित भएपछि लाग्ने छु । व्यवसायीहरुको हरेक पहलको साथी बन्न, महिला ब्यबसायीको सशक्तिकारण गर्न पनि मेरो उम्मेदवारी हो ।
तपाईं निर्वाचित भएपछि संघलाई व्यवस्थित बनाउने अरु योजना पनि त होलान नि ?
निश्चय पनि म विजयी भएपछि संघलाई व्यवस्थित बनाउन अहोरात्र खट्ने छु । म संघमा सदस्य, सचिव भएर काम गरेको अनुभव पनि मसँग छ । त्यसैले संघलाइृ व्यवस्थित बनाउने धेरै योजना मसँग छन् । रेमिट्यान्सले समग्र राष्ट्रको आर्थिक पाटो धानेको छ । हामीले जति योगदान गरेपनि यसको उजागार गर्न सकेका छैनौ । हामीले पटक–पटक यसको महत्व र व्यवस्थित बनाउने कुरा उठादै आएका छौं । तर, हामीलाई हेर्ने नजर अलिकति पनि बदलिएको छैन । हामीले हाम्रोतर्फबाट जति फाइदा समाजलाई दिएपनि समाजमा केहि परिवर्तन आउन जरुरी छ । त्यसका लागि स्थानीय तहमा स्थानीय प्रतिनिधिसँग मिलेर काम गर्ने योजना छ ।
त्यो बाहेक अन्य योजना पनि होलान नि ?
हामीले निशुल्क कामदार पठाउनुपर्ने तर सरकारले (जीटुजी)को नाममा चर्को असुली गर्ने यो विषय पब्लिकमा पुगेको छैन । त्यसैले सरकारले लिने शुल्क हामीले पनि लिन पाउनुपर्छ भन्ने विषयलाई मिडिया र जनतासम्म पुराउने मेरो योजना छ ।
। विभिन्न वाहानामा व्यवसायीलाई सरकारले दुख दिने काम गरेको छ ।
छापा हान्ने, झुट्टा मुद्धा चलाउने र व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गर्ने काम भैरहेको छ । व्यवसायीलाई कारवाही गर्नुअघि संघसँगको छलफल, समन्वय र सहभागितका लागि नियमन निकायलाई म आग्रह गर्ने छु । धेरै बर्षदेखि नयाँ गन्तव्य थपिएको छैन । सरकारले नयाँ गन्तव्य खोज्न ४ बर्षअघि समिती बनाएको थियो । अब व्यवसायीको पहलमा सरकारलाई समेटेर हामी आफैले गन्तव्य खोज्नुपर्छ । सरकारले त्यस मुलुकसँग श्रमसम्झौता र पुलको काम गर्नुपर्छ । रोजगारदाता मुलुक र हामीले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अगाडी बढ्नका लागि उद्योग बाणिज्य महासंघलाई भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नेछु ।
तपाईँको जित्ने आधार के–के छ ?
वर्तमान नेतृत्वबाट दिक्क भएका व्यवसायीहरुले हामीप्रति गरेको विश्वासलाई विश्वासघात नगरी काम गर्ने छौँ । यो हाम्रो प्रतिवद्धता हो । त्यसैले हामीले सबैसँग आग्रह गरेका छौँ । हामीले हाम्रो ‘संयुक्त व्यवसायिक समूह’मा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी सबैलाई समावेश गरेका छौँ । सात जनाको पदाधिकारीमा हामीले महिला आदिवासी, जनजाति सबैलाई समेटेका छौँ ।
हामीलाई केही साथीहरुले द्वितिय उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सदस्यमा दुई जना महिला समावेश गरेका छौँ । उनीहरुले महिलाले के गर्न सक्छन् र ? भनेर आलोचना गरेको पनि हामीले सुनेका छौँ । म उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु । अहिले हाम्रो देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ । सभामुख महिला हुनुहुन्छ । केही समय अघिसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाशीस पनि महिला नै हुनुहुन्थ्यो । अहिले उद्योग बाणिज्य महासंघको अध्यक्ष पनि महिला नै हुनुहुन्छ । त्यसैले हामी उहाँहरुलाई पनि हामीबाट सिक्नुहोस् भन्ने सुझाव दिन्छौँ ।
Previous अध्यक्ष ओली र थापाबीच छलफल, के–के भयो कुराकानी ?
Next श्रीमान भेट्न हिडेकी महिला बलात्कृत
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा सन् २००६ मा नेपालीहरुको सहभागितामा बर्कली अन्नपूर्ण लायन्स क्लब स्थापना गरी त्यसको संस्थापक …